Maxay yihiin Sharciyada uu Madaxweynaha Galmudug saxiixay? - Awdinle Online
Munaasabad ka qabsoontay Madaxtooyada Galmudug ayaa madaxweynuhu ku saxiixay shuruuc muhiim ah oo kala ah:-
Shariga Maarreynta Deegaanka, Sharciga Hay’adaha, Sharciga Dhismaha Booliiska iyo Sharciga Dowalaha Hoose.
Shuruucdan waxaa soo diyaariyey wasaaradaha kala ah; Deegaanka, Qorsheynta, Amniga, iyo wasaaradda Arrimaha Gudaha& Dowlaha hoose.
Munaasabadda saxiixa waxaa kasoo qeybgalay Madaxweyne Kuxigeenka DGM, Guddoomiyaha Barlamaanka, Guddiyada joogtada ah ee Barlamaanka, Xubno ka tirsan labadda gole, Garsoorka, La- taliyeyaal & Hawlwadeenno ka tirsan Madadaxtooyada.
Madaxweynuhu wuxuu Golaha Barlamaanka iyo wasiiradda Galmudug uga mahadceliyey ansixinta shuruucdan. isagoona xusay in shuruucdu ay gundhig u noqondoonto in sifo sharci ah xukuumaddu u fuliso hawlaha hortebinta leh ee loo igmaday.
Previous articleDEG DEG:- Weerar kale oo ka dhacay Faransiiska
Next articleErdogan oo soo saaray Farriin ku socota dalal ay kamid tahay Somalia